Runtii ma Hawlgal baa? | Martech Zone
Runtii ma Hawlgal baa?
Khamiista, Oktoobar 3, 2019 Khamiista, Oktoobar 3, 2019 Douglas Karr
Haddii aan la hadlo saaxiibaday 83% in ka badan bishan marka loo eego bishii hore, ma anigaa ahay hawl badan? Ka waran haddii aan faallooyin kooban ka sameeyay iyada? Miyaan ku hawlanahay?
Qeexitaannada hawlgelinta waa cad yihiin:
(1) Heshiis rasmi ah oo lagu guursado.
(2) Isuduwidda in wax la qabto ama meel la aado waqti go'an.
Merriam Webster Qeexitaanka Hawlgelinta
In ka badan a toban sano ka hor, Waxaan markii ugu horreysay daabacay qoraalkan oo aan jeclaan lahaa in suuqleydu ay joojiyaan muujinta ereyga hawlgelinta sida metrik ganacsi ahaan. Maanta wali waa arrin ka jirta warshadeenna sidaa darteed waxaan ula socday fiidiyaha hoose.
Waqtiga lagu cabiray bogga, tirada faallooyinka, tirada dadka raacsan, tirada codadka, ama xitaa tirada daqiiqadaha ee fiidiyaha la daawaday ayan wax ka taraynin ganacsigaaga illaa aad la jaan qaadi kartid hawlgelinta si dhab ah natiijada ganacsiga. Haddii aadan kari karin, waa uun a metric aan waxba tarayn.
Weli waxaan ka cabanayaa ku xadgudubka ereyga hawlgelinta maanta maxaa yeelay waxaan markhaati u ahay macaamiil aad u tiro badan oo lacag aad u tiro badan ku bixinaya waxyaabaha aan bixinayn wax faa'iido ganacsi ah.
Maaha hawlgelinta, waa shukaansi. Taasna macnaheedu maaha in suuqleydu aysan raacin nooc ka mid ah isdhexgalka ka dhexeeya daawadayaasha, kuwa raacsan, taageerayaasha, dhagaystayaasha, iwm. Laakiin suuqleyda waa inay ugu dambeyntii la jaan qaadaan isdhexgalkaas natiijooyinka ganacsiga dhabta ah.
Shukaansigu waa hawl kasta oo bulsheed oo ay qaadaan, sida caadiga ah, laba qof oo ujeedkoodu yahay mid kasta oo qiimeynaya ku habboonaanta kan kale inuu yahay lamaanahooda.
Haddii booqdayaashaadu ay waqti badan ku bixinayaan bartaada, hambalyo! Inbadan ayaad shukaansaneysaa waana calaamad fiican… laakiin hawlgal ma ahan. Markuu soo booqdahaagu soo iibsado faraantiga oo uu farta kaa saaro, ii sheeg inaad meherad tahay. Marka tirada booqdayaashaasi ay sii kordhaan oo ay waxbadan ka iibsadaan bartaada internetka, markaa waxaad ii sheegi kartaa in hawlgalkaagu uu sii kordhayo.
Suuqleyda aan awoodin cabbiraan soo celinta maalgashiga warbaahinta bulshada adeegso ereyo sida kaqeybgal si aad u sharciyeeysid dadaalkooda oo aad ugu qanacdo macaamiishooda… iyagoo lacagtooda luminaya
Markii Jeffrey Glueck uu furay khudbadii furitaanka shirkii Ururka eMarketing toban sano ka hor, wuxuu ka sheekeeyay sheeko weyn Travelocity bilaabida ololaha warbaahinta bulshada adoo adeegsanaya gnome iyo MySpace.
Marka loo eego heerarka kaqeybgalka, ololuhu wuxuu ahaa guul weyn… qof walbana wuxuu la saaxiibay gnome-ka iyo faallooyinka iyo wada sheekaysiga ayaa duulay! Dadku waqti badan ayey ku bixiyeen bogga waxaana jiray tan soo-gaadhis ah. Nasiib darrose, in kastoo, ololuhu ku kacay $ 300k oo uu ku guuldaraystay wadista ganacsiga ee Travelocity. Si kale haddii loo dhigo eng hawlgal la'aan.
PS: On note note… Waxaan leeyahay gabar saaxiib ah laakiin kuma mashquulno.
PPS: Mahadsanid Ablog Shineemo soo saarista fiidiyowgaan cajiibka ah! Tani waa tii labaad ee noo Quraafaad, khaldan, iyo kirada taxane.
Sidecar: Istaraatijiyadaha Xayeysiinta Amazon ee Xogta Lagu Wado
Sidee Muuqaalka 3D + CPQ u wadaa iibinta
Apr 25, 2009 at 8: 52 AM
Rabbi wanaagsan… Waxaan ku sigtay inaan ku dhaco kursigeyga xafiiska ka dib markaan aqriyay cinwaanka qoraalkan. Taraafikada dhib malahan mustaqbalka fog .. iibku waa waxa lagu xisaabtamo .. Dakhliga. Dakhliga. Dakhliga.
Apr 25, 2009 at 12: 51 PM
Waxaan kuugu hambalyeynayaa keenista Stephen markabka. Waa nin weyn waana ku faraxsanahay inuu kula soo biiray niman… Waxaan u maleynayaa inaad la yaabi doontaan sida uu wax u qodayo oo uu wax u tilmaamayo.
Re: tan Waxaan u maleynayaa in dhisida xiriir lala yeesho macaamiishaada iyo macaamiishaadu ay tahay mid aad iyo aad muhiim u ah - waxyaabaha qaarna aad ayey u adagtahay in la cabiro. Mid ka mid ah sababaha aan aad u jeclahay blogga iyo warbaahinta bulshada ayaa ah in AAN noqon karo mid hufan, waxaan noqon karaa daacad, waxaan siin karaa macaamiishayda fiiro badan - laakiin inta badan oo dhan - Waan ogahay in dhamaan waxyaabahaas adag ay ahaayeen in horay loo cabbiro waa la qiyaasi karaa hada.
Kaliya waxaan rabaa inaan la tartamo kuwa suuqleyda ah si ay u siiyaan macaamiishooda dabool muuqda oo u keenaya iyaga caddeyn ah in horseed u tahay b, b ilaa c, iyo c ilaa d. Markay macaamiisha ogaadaan inay furan yihiin, daacad yihiin oo la heli karo… way ku fiicnaan doonaan taas! Kaliya waa inaan u cadeynno iyaga.
Way fiicantahay inaan halkan kugu arko! Goorma ayaad imaanaysaa Koobka Bean?
Apr 25, 2009 at 11: 44 AM
Waxaa laga yaabaa inaan halkaan ku galno dood macno leh, laakiin waxaan u maleynayaa inay tahay mid mudan in la helo.
A. Waxay umuuqataa kaqeybgalku inuu yahay dhacdo keli keli ah isbarbardhigaaga (ama uguyaraan dhacdo kicisay kaliya iibsiyada). Waxaan ku doodi lahaa in qeexitaan kale oo ku saabsan ka qaybqaadashadu ay tahay "ku soo dhex gal ama ku lug yeelo" shaqsi wadahadal ama xiriir. Ka qayb qaadashadu maahan dhacdo keli ah ama xitaa jawi kacsan. Waa cilaaqaadka yar yar ee ku dambeeya xiriir hodan ah oo dhexmara shirkadda iyo macaamiisha. Waxay yaraynaysaa masaafada udhaxeysa.
B. Mid kasta oo ka mid ah tibaaxahaas "hawlgelinta" ee aad liis garaysay waa la qiyaasi karaa aniguna sidoo kale, waxaan ku qeexayaa inay yihiin hawlgal. Halka aan kula wadaagayo shakigaaga waa marka mid kasta oo ka mid ah tibaaxahaasi la tirakoobo iyaga aawadood. Sababtoo ah qof ayaa faallooyin ka bixinaya macnaheedu maahan inay ku dhow yihiin inay qaadaan tallaabo ganacsi lagu qeexay sida iibsashada. Falalka kaqeybgalka waa inay ku dhismaan natiijada ugu dambeysa ee ganacsigu doonayo. Suuqgeyntu waa inay dhameystirto wadadan (badiyaa aan toos ahayn). Tusaale ahaan, halka Travelocity uu ku guuldareystay wuxuu abuuray uun olole wacyi gelin qabow ah iyada oo aan laga fikirin sida macaamil kasta oo ka qeyb qaadashadiisu ay shaqsiga ugu hesho inuu dhameystiro yoolka dhamaadka.
C. Haddii aan dooneyno inaan ku shaqeyno isbarbardhiggaaga… Uma maleynayo in shirkadaha runti ay ka helaan giraan macaamiishooda. Shirkaduhu waa inay si joogto ah u soo jiitaan macaamil, iyaga la shaqeeyaan, xiriir cusub la yeeshaan iyaga. Haddii shirkad u maleyneyso inay ugu dambeyntii macaamiishooda ku dhex martay dariiqa guurka, waxay la yaabi doonaan sida dhabta ah furitaanka sawirkooda.
Waan ka xumahay faallooyinka daba dheeraaday, laakiin waxaan aaminsanahay in ka qaybqaadashadu ay tahay halbeeg muhiim u ah suuqgeynta iyo in si ka waxtar badan loo dhisi karo. Kaliya aragti ka duwan.
Apr 25, 2009 at 12: 37 PM
Warcelin weyn iyo wadahadal wanaagsan. Jawaabtaada gudaheeda, waxaan kula tartami lahaa fikradda ah in mid ka mid ah dhacdooyinkan dhab ahaantii 'u horseedaan' xiriir lacageed. I tusi mashiinka iibka ee hal shirkad oo bixiya caddeyn ah in habka aasaasiga ah ee dadka looga raadsado inay wax uga iibsadaan meheraddaadu ay ku bilaabato iyaga oo ka faalloonaya bartaada internetka… ama inuu jiro xiriir u dhexeeya tirada dadka raacsan ee aad leedahay iyo guud ahaan miisaaniyadda suuqgeyntaada.
Waxaan u maleynayaa in jahwareerkeygu uu kujiro xaqiiqda ah in dadku rumeysan yihiin in tani ay noqoneyso nooc ka mid ah tilmaamaha waxqabadka beenta ah ee ganacsiyada. Suuqge ahaan, waxaan ubaahanahay inaan bixiyo HOYGA iyo xogta gorfeynta ee muujineysa sababaha iyo saameynta xiriirka ka dhexeeya waxyaabahan iyo iibsashada dhabta ah. Ilaa maanta, waxaan u maleynayaa inay tahay bs
Apr 25, 2009 at 7: 45 PM
Doug, tani waa isbarbardhig weyn, waxaanan oggolahay 'hawlgelinta' inay si xad dhaaf ah u isticmaashay oo ay gabowday. Ugu dambeyntii suuqleyyaashu waxay u baahan yihiin inay diirada saaraan waxa ganacsiga kicinaya oo dadka u keenaya dhab ka ah inay lacagtooda uga daayaan wax soo saarkaaga iyo adeegyadaada. -Michael